चिफसाब ! सेनाकाे सिग्नल युनिटहरुको दुःख पीडा पनि बुझियोस् -3ghumti
चिफसाब ! सेनाकाे सिग्नल युनिटहरुको दुःख...
आश्विन १, २०७८ शुक्रवार १८:३७ बजे
काठमाडौँ l सिग्नल युनिटहरुमा देखिएका विकृति विसंगितहरू बारे केही बुँदाहरु टिपोट गरेर पठाएका छौं । कृपया स्थान दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । तीन घुम्तीमार्फत सम्बन्धितमा यो विषय पुगोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं। यस अघि पुर्याउँदै आउनु भएको सहयोगका लागि पनि धेरै धन्यवाद ।
श्रीमान् प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माज्यू हजुरलाई सर्व प्रथम हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौं। हजुरको कार्यकाल सफल होस् यही कामना गर्दछौं।
भनिन्छ, सायद नेपालको सबैभन्दा पवित्र संस्था भनेर नेपाली सेनालाई मानिन्छ। तर अफसाेस संस्था जस्तो त्यसको नेतृत्व गर्ने अधिकृतहरु पनि संस्था जस्तै पवित्र र निश्चल भए सायद आज यस संस्थामा कार्यरत कुनै पनि सैनिक जवानहरुले आफ्नो मातृभूमिलाई छोडेर विदेशीहरुको गुलाम बनेर रातदिन रगत पसिना बगाउन पर्ने थिएन हाेला । लाखौ युवाहरु नेपाली सेनाजस्तो पवित्र संस्थामा प्रवेश गर्न हिचकिचाउने थिएनन् होला ।
“सानालाई ऐन ठूलालाई चयन” नेपाली सेनामा प्राय सबै युनिटहरुमा आज पनि यही वेथिति नै चलिरहेको छ । हो, चिफसाब हाम्रो सिग्नल युनिटहरुमा पनि यस्तै राज चलिरहेको छ। यो वेथितिलाई हजुरले जरै देखि उखेलर फाल्नु हुन्छ भन्ने आशा व्यक्त गरेका छौं ।
नेपाली सेनामा कार्यरत हामी सबै अधिकृत/पदिक तथा अन्य दर्जाहरुलाई एउटै ऐन र नियमले बाँधेको छ तर सायद यो कुनै किताबको पानामा मात्र सीमित भएको जस्तो देखिन्छ । व्यवहारमा हेर्न टाढा जानु पर्दैन, त्यही जंगी अड्डा नजिकैको सिग्नल युनिटहरुलाई हेरे पुग्छ ? दर्जा अनुसार छुट्टाछुट्टै नियम र कानून छ। सिपाही बिल्लादारहरुलाई पदिकलाई छुटै अनि अधिकृतलाई छुट्टै ।
यो विषमा हामीले आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्न पनि कसैले सुनेकाे महसुस गर्न पाउदैनौं । आवाज उठायो भने अधिकृतहरुको रिस डाहा गरेको सोचर उल्टै कुरालाई टाल्न खोजिन्छ । तल्लो दर्जाले आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको रिस गरेका होईनौ केवल आफूले पाउने सेवा सुविधाका बारेमा बुझ्न खोजेका हौं ।
नेपाली सेनामा भएका वेथिति तथा विकृतिहरुलाई हटाई नेपाली सेनामा कार्यरत सबै सकलदर्जाहरुको मनोबल उच्च बनाएर देश र जनताप्रति सदैव समर्पित गर्न हौसला प्रदान गर्ने योभन्दा अघिका चिफसाबहरुले प्रयास नगरेको पनि होईन तर तल्लो दर्जालाई चाहिं मान्छे नगन्ने पशु सरह व्यहोहार गर्ने अधिकृत तथा पदिकहरुको कमी छैन यहाँ ।
सँधैभरी कोभिड-19 को कारण देखाएर हामीजस्ता तल्लो दर्जाका सिपाहीहरुलाई व्यारेकभित्र मात्र सीमित बनाएर बिरामी भए पनि बाहिर उपचार गर्न जान पाएका छैनौ । बाहिर उपचार गर्न गयौं भने कोरोना सर्छ, व्यारेक भित्र कोभिड-19 फैलन्छ भनेर हामी १ घण्टा कतै चेकअप तथा उपचार गर्न नगई यही व्यारेक भित्र पीडा सहेर बसेका छौं ।
भोलि हाम्रो ज्यान तलमाथि भयो भने हाम्रो अनि परिवारको जिम्मा कसले लिने ? के व्यारेक भित्र कोभिड 19 रोग फैलाउने हामी जस्तो तल्लो दर्जाहरु नै हौं र ? के हामीलाई यो रोगबाट बच्न कस्तो सावधानी अपनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान नभएको हो र ? हामीले आफ्नो सुरक्षा गरेर सावधानी अपनाउन जानेका छैनौ र ?
सेनाका हाम्रा अधिकृतहरु चाहिं दिन रात बाहिर गईरहने, वहाँहरुलाई चाहिं कोभिड-19 ले नछुने ? सायद नेपाली सेनामा दर्जा अनुसार कोभिड-19 रोग फैलिने भएर हो कि यस्तो वेदभाव भएको ? अधिकृतहरु मात्र होईन अधिकृतहरुका प्यारो मान्छेहरु पनि उहाँहरुको आदेशमा मिलाईएर आफ्नो पर्शनल काममा हिडडुल गरिरहेका छन् । जंगी अड्डामा कार्यरत सम्पूर्ण रथीवृन्द/अधिकृत/पदिक तथा अन्य दर्जाहरु दिनहुँ घरजाने आउने गरिरहेका छन ।
अनि हामी त्यही पेरिमिटरमा भएर पनि सिग्नलका युनिटहरुलाई चाहिं किन यति धेरै वेदभाव चिफसाब ? के कोभिड-19 फैलाउने हामी सिग्नलका युनिटहरु मात्रै हुन् र ? सिग्नलका सकलदर्जाहरुलाई मात्र कोभिड-19 ले छुने हो र ?
ऐन/नियममा बस्न तल्लो दर्जाका सकल दर्जाहरुलाई राती रोलकल सुनाईन्छ तर पहिले आफूहरूनै त्यो नियममा नबसेपछि कसरी अरुलाई त्यो नियम लगाउन सकिन्छ ? अनि कसरी अरुले त्यो नियम पालना गर्छन् ? समाज परिवर्तन गर्नुछ भने पहिला आफूबाटै सुरु गरम् भन्ने भनाईको तात्पर्य राम्रोसँग बुझेर त्यही अनुसार अगाडि बढाईयोस् ।
अधिकृतहरुको कारणले गर्दा हामी निर्दोष सिपाहीहरुले दु:ख पाउन नपरोस्। हाम्रो ज्यान माथि खेलबाड नगरी समयमै आफ्नो समस्या समाधानका लागि कोभिड-19 को कारण नदेखाई सुरक्षाको सम्पूर्ण मापदण्ड पुर्याएर समस्या सामाधान गर्न समय मिलाईदन सम्बन्धितमा ध्यान पुर्याईयोस् । नेपाली सेना तथा सिग्नल युनिटका सम्पूर्ण पीडित सकलदर्जाहरु